March 2010 edited March 2010 in About Forum
ဘယ် Browser ကိုသုံးပြီးကြည့်တာလဲပြော
So what can i do bro?
please answer , what browser are you using ?
I'm using Chrome.Thank you for reply.
ကိုစေတန်ရေ safari4ကို windows7မှာသုံးနေတာ မြန်မာဖောင့်တွေ မပေါ်ဘူးဗျ။perference မှာ ဇော်ဂျီသွားပြောင်းလဲရဘူး။
ကျနော်ဒီဖိုရမ်ကပိုစ်တွေဖတ်ရင်လေးထောင်.တုံးတွေပဲမြင ်ရတယ်.ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုကာပြောပေးပါ။ခေါင်းစဉ်ကွေကဖတ ်လို့ရတယ်ဗျ။
ကျနော်လဲအဲဒီပြသနာတက်နေတယ်။မနေက အပြင်သွားရင်း Wi-Fi လေးရတာနဲ့ iPhone နဲ့ MZ ကိုတက်လာတာ။home page မှာအကုန်ပေါ်တယ်၊post တခုကို၀င်ဖတ်လိုက်တာ လေးထာင့်တုံးတွေဘဲပေါ်နေတယ်။ကျနော်တောင်လန့်သွားတယ်။iphone ကဇော်ဂျီကို ပြန်စစ်ကြည့်တော့လဲအကောင်းဘဲဗျ။အဲဒါနဲ့ ကိုယ်စေတန် blog ကို၀င်ဖတ်ကြည့်တော့ အကုန်ပေါ်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲမသိ